Kedu ihe bụ Plex na kedu ka ọ si arụ ọrụ na Smart TV | Nzukọ mkpanaka
Kedu ihe bụ Plex na kedu ka ọ si arụ ọrụ na Smart TV
Daniel Terrasa | 25/09/2021 12:00 | Mmemme
Ọ bụrụ na ị nụrụ nke Plex na ihe niile ọ nwere ike inye ndị ọrụ ya, o doro anya na ọ dọtala mmasị gị. Na post a anyị ga -akọwa ihe Plex bụ yana otú o si arụ ọrụ. Na nkọwa na yana ụfọdụ ọmarịcha azịza iji nweta ihe kachasị na ya.
Plex zuru oke ezigbo nkwanye ozi mgbasa ozi ọtụtụ oge. N'ihi ya, anyị ga -enwe ike ịlele ọdịnaya sitere na ngwaọrụ ndị ọzọ, na -enweghị ịchekwa ya na nke anyị. N'ụzọ dị otu a, dịka ọmụmaatụ, ihe nkiri na usoro gaa na egwu, foto na ọdịnaya ọ bụla ọzọ akwadoro na kọmpụta nwere ike kpọọ na ama.
Ihe oru Plex nwere mmalite nke onwe ya na 2010. Echiche mbụ sitere na mmalite ndị America Plex, Inc.. Ụlọ ọrụ a bụ maka mmepe nke Plex Media Server na ngwa. Edebanyere ngwanrọ a niile n'okpuru akara ụghalaahịa "Plex".
1 Kedu ihe bụ Plex?
2 Budata ma wụnye Plex
3 Jiri Plex na ngwaọrụ ndị ọzọ (Smart TV)
3.1 Otu esi ejikọ Plex na Smart TV
3.2 Nsogbu njikọ na ngwọta
3.3 Kekọrịta ọdịnaya
4 Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m Smart TV n'ụlọ?
Kedu ihe bụ Plex?
Plex bụ ngwa na -enye anyị ohere gbanwee kọmputa anyị ka ọ bụrụ nnukwu ebe mgbasa ozi. Isi ọrụ ya bụ ịmata faịlụ mgbasa ozi niile anyị debere na folda anyị iji hazie ha ma emechaa. kee ihe dika nke anyi Netflix.
Ọ dị mma, ma eleghị anya nke ahụ bụ i emomi ma ọ bụ ịsọ mpi na Netflix, nkwupụta dịtụ ntakịrị, n'agbanyeghị na echiche ahụ bụ otu. Mgbe ọ nọ na Netflix ọ bụ ikpo okwu n'onwe ya na -enyere ọdịnaya anyị nwere ike ịnweta na sava ya, na -eji Plex bụ anyị na -agbakwunye ọdịnaya mgbasa ozi na -amasị anyị. Na nke a nwere ike bụrụ nnukwu uru. A na -eme nke a site na folda dị na kọmpụta nke anyị họrọburu dị ka "Mkpọkọta folda". Oke nchekwa ahụ? Nke na -enye anyị ohere ike nke diski ike anyị.
Ihe kacha mma gbasara Plex bụ na ọ dị dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọdịyo na vidiyo niile a ma ama. Ọ dịghịkwa mkpa karịa ka ọ ga -enye anyị ịhazi Pọtụfoliyo anyị site na isiokwu ma ọ bụ n'ụdị ọdịnaya, masịrị anyị. Ọ na -atọkwa ụtọ inwe ike jikọọ na ebe dị anya na ọwa ịntanetị ndị ọzọ.
Njirimara Plex ndị ọzọ dị mma: Ozugbo etinyere ngwanrọ ahụ, ị nwere ike nweta ya na ngwaọrụ ọ bụla. Ihe ị ga - eme bụ ịwụnye ngwa nke faịlụ Plex Media Server na kọmpụta ebe akwadoro faịlụ mgbasa ozi ma hụ na ọ na -arụ ọrụ mgbe ị na -eji ikpo okwu.
Ụzọ ọzọ ị ga -esi eme ya bụ site n'iji ya eme ihe Ndị ahịa Plex, nke nwere ụdị akọwapụtara maka nyiwe niile: Android, iOS, GNU / Linux, macOS, Windows, SmartTV, Chromecast na ọbụna consoles PlayStation na Xbox. Yabụ, anyị nwere ike ịhụ vidiyo anyị na nke ọ bụla n'ime ha.
Budata ma wụnye Plex
Nzọụkwụ mbụ iji Plex bụ ibudata ngwa ahụ Plex Media Server site na gọọmentị webụsaịtị. Naanị ị ga -abanye ya wee pịa bọtịnụ ahụ «Budata». Mgbe nke a gasị, a ga -egosipụta menu nke ị ga -ahọrọ ụdị nke dabara maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Anyị kwesịrị ịhọrọ nke anyị.
Mgbe nbudata, obere oge tupu ịmalite usoro nrụnye, anyị nwere ike họrọ n'ime folda anyị chọrọ ịwụnye ngwa na ibe nnabata. Iji mee nke a, ịkwesịrị pịa bọtịnụ "Nhọrọ" wee họrọ ebe nchekwa na kọmputa anyị. Mgbe nke ahụ gasị, anyị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye" na usoro a ga -agba na akpaghị aka.
Mgbe emechara usoro a, pịa bọtịnụ "Tụfuo" ịmalite ngwa. Na -esote, ibe ga -emepe n'ime ihe nchọgharị nke anyị ga -edebanye aha site na itinye aha njirimara, adreesị ozi -e jikọtara ya na paswọọdụ.
na njikwa akara main anyị na -ebu ụzọ gaa taabụ "Aha", site na nke anyị na -enweta menu nke anyị ga -ede aha sava Plex anyị. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga -pịa bọtịnụ "Osote" ịga na "Media Library". Na ndabara, naanị abụọ na -apụta: foto na egwu, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ndị anyị chọrọ naanị site na nhọrọ "Tinye ọba akwụkwọ". Nlele na ọnọdụ ọbá akwụkwọ bara ezigbo uru maka ịgagharị ọdịnaya site na edemede (ụdị, aha, afọ, wdg), nke anyị nwere ike ịmepụta dịka mmasị anyị si dị.
Mgbe nke a gasị, anyị nwere ike bido ijikwa ọdịnaya anyị na, karịa, kporie ndụ. Ma na kọmpụta yana site na ngwaọrụ ndị ọzọ, dịka anyị kọwara n'okpuru:
Jiri Plex na ngwaọrụ ndị ọzọ (Smart TV)
Ọ bụ njirimara a kpọmkwem mere Plex ji bụrụ ihe na -atọ ụtọ. Enwere ike iji ya na mbadamba, mobiles na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ụzọ isi mee ya na nke ọ bụla n'ime ha yiri, yana ọdịiche nke onye ọ bụla. Isi ihe mejupụtara ya bụ nbudata ngwa Plex yana ijikọ ya na sava anyị.
Otu esi ejikọ Plex na Smart TV
Usoro a bụ otu ihe ahụ ejiri jikọta ngwaọrụ ndị ọzọ dịka mbadamba ma ọ bụ smartphones. E nwere naanị ole na ole dị iche. Iji mee ihe njikọ dị n'etiti Plex na Smart TV ị ga -emerịrị usoro abụọ a dị mfe:
Iji malite, ị ga-amalite nweta Smart TV anyị, gaa n'ụlọ ahịa ngwa na chọta ngwa Plex. Naanị ị ga -ebudata ya, nke a ga -echekwa ya n'ọbá akwụkwọ.
Mgbe ahụ ị ga- mepee ọba akwụkwọ (tupu ị ga -eji akaụntụ nke ọrụ a banye, otu anyị ga -eji kee ihe nkesa) wee tinye nzere anyị aha njirimara na paswọọdụ.
Nke a bụ ihe niile dị na ya. Mgbe nke a gasị, anyị ga -abanye n'ime Plex anyị ga -enwe ike ịhụ ọdịnaya niile ọ na -enye gị site na smart TV anyị. Iji nweta ọdịnaya nke anyị na -edobe na sava anyị, ị ga -aga na nhọrọ nke "+ Ọzọ".
Nsogbu njikọ na ngwọta
Idozi Nchọpụta akpaghị aka nke vidiyo
Agbanyeghị na usoro a dị nfe, ọ nwere ike bute ụfọdụ nsogbu mgbe ụfọdụ. Otu n'ime ihe na -emekarị na -eme mgbe Plex anaghị achọpụta ọdịnaya anyị. Ọ nwere ike iwe ntakịrị, mana ọ bụ okwu dị mfe idozi.
Iji mee nke a, anyị ga -ebu ụzọ gaa na ọrụ weebụ wee banye folda ebe ọdịnaya anyị enweghị ike ịhụ dị. Anyị ga -pịa akara ngosi ntụpọ atọ dị na folda a na -ekwu okwu. A ga -egosipụta usoro nhọrọ n'okpuru, gụnyere ndị masịrị anyị: "Chọta faịlụ n'ime ọbá akwụkwọ". Naanị nke a ka anyị ga -amanye Plex ka ọ mee nyocha nke folda mpaghara, na -egosi ọdịnaya ya niile emelitere.
Nsogbu ọzọ na -adịkarị bụ nchọpụta vidiyo akpaaka dara. Ọzọkwa na nke a ụzọ esi edozi ya dị mfe:
Na web version, ị ga -abanye folda ebe a na -akwado vidiyo a wee pịa na pensụl akara ngosi nke na -egosi mgbe anyị na -efegharị cursor n'elu ya. Site n'ebe ahụ anyị nwere ike dezie ozi niile gbasara vidiyo a na -ekwu.
Nke masịrị anyị bụ nke "Akwụkwọ mmado", nke onyonyo njirimara pụtara na ya. Naanị dọrọ ya ka o yie ka ọ dị maka ịgbanwe mkpuchi.
Enwere nhọrọ nke kerịta ọdịnaya nke sava mgbasa ozi anyị na ndị enyi anyị. N'ụzọ dị otu a, ha nwekwara ike ilele vidiyo anyị site na Smart TV ha. Iji mee nke a, anyị ga -enwerịrị ụdị web wee soro usoro ndị a:
Mbụ anyị ga -pịa na akara ngosi ato anyị ga -ahọrọ nhọrọ "Kekọrịta".
Mgbe ahụ, naanị ihe ị ga -eme bụ ịrịọ email eji na Plex ma ọ bụ aha njirimara nye ndị enyi anyị, iji tinye ha na nhọrọ a.
Ozugbo emechara nke a, a ga -egosipụta windo yana folda niile. họrọ ndị ị chọrọ ịkekọrịta.
Ya mere, mgbe nkeji ole na ole nke ichere (ọ ga -adabere na ọnụọgụ na ụdị ọdịnaya), kọntaktị anyị ga -enwe ohere na sava anyị na ọdịnaya ahọrọburu.
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m Smart TV n'ụlọ?
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere smart TV n'ụlọ, mana nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe mgbochi ịnụ ụtọ ọdịnaya Plex na ngwaọrụ na mgbasa ozi ndị ọzọ. Ná ngwụsị nke ụbọchị anyị na -ekwu maka ọrụ ọtụtụ mmadụ. Nke ahụ na -ebutekwa anyị ohere na ohere dị iche iche.
Yabụ ọ bụrụ na echiche gị bụ nwee Plex na TV ụlọ gị, mana ịnweghị Smart TV, ndị a bụ ndị ọzọ ụzọ ọzọ:
TV nke Amazon.
Chromecast na Google TV.
Xiaomi Mi Stick.
Na nchịkọta, anyị nwere ike ịkọwa Plex dị ka ngwa zuru oke maka nwee Netflix nke anyị n'ụlọ. Otu ụzọ isi hazie ọdịnaya ọdịyo anyị niile nke ọma na nkewa ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ya n'ime ụlọ anyị. Site na Smart TV anyị ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Kedu ihe bụ Plex na kedu ka ọ si arụ ọrụ na Smart TV
Etu esi eme ọba akwụkwọ na Minecraft
Otu esi ejikọ Twitch Prime na GTA